Soomaaliya oo taageertay go’aanka Sucuudiga ee arrimaha Xajka | Baydhabo Online
Soomaaliya oo taageertay go’aanka Sucuudiga ee arrimaha Xajka
Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo dhawaysay dadaalada Boqortooda Sacuudi Arabiya oo ku aadan u adeegista arrimaha Xajka iyo booqashada goobaha xurmada leh ee ku yaala dalkaasi, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda Arimaha Dibada ee Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in looga baahanyahay dowlada Iiraan ay taageerto dadaalada Sacuudiga uu wado ee ku aaddan arrimaha Xajka ee Sanadkaan, taas oo ay taageereen dowladaha Islaamka.
Qaabeynta iyo nidaamka arimaha Xajka waa masuuliyad gaar ah oo saaran dowladda Sacuudiga sida lagu sheegay warkaan ka soo baxay dowlada Soomaaliya, waxaana sidoo kale dowladdu ay sheegtay inay raacsantahay dhamaan go’aamada xiriirka laleh arrimahaan ee ka soo baxa golaha Iskaashiga Islaamka.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay qorsha dowlada Iiraan ay ku damacsantahay inay faragalin ku yeelato arrimaha Xajka, waxaana sidoo kale Soomaaliya ay muujisay in qorshaan uu u muuqdo mid dowlada Iiraan ay ku doonayso in dadka Xujayda ah ee sanadkaan ay kaga hor istaagto xajka.
Ugu Danbayntii dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahanyahay in la ilaaliyo shacaa’irta waawayn ee Islaamka sidoo kalana laga dheeraado wax kasta oo keeni kara Shaki.